XAQIIQOOYIN: Laacibiinta caawa CL ku wajahaya kooxohoodii hore & arrimo kale | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha XAQIIQOOYIN: Laacibiinta caawa CL ku wajahaya kooxohoodii hore & arrimo kale
XAQIIQOOYIN: Laacibiinta caawa CL ku wajahaya kooxohoodii hore & arrimo kale
(Hadalsame) 17 Sebt 2019 – Xaqiiqooyin ku saabsan UCL 2019/2020. Caawa waxaa bilaabanaya Horyaalka Naasiyaaaha Qaaradda Yurub qaybtiisa Groupyada, qoraalkaana waxaan kusoo gudbinayaa xaqiiqooyin iyo xifaaltanno laga filankaro.
1. Keylor Navas wuxuu ka hortagayaa Kooxdii Magaca u yeeshay ee Real Madrid ee uu ka qaaday 3 Champions League. Sidee dareenkiisu noqon doonaa?
2. Kylian Mbape inkastoo uu kulanka caawa dhaawac uga maqanyahay haddana wuxuu ka hortagidoonaa Kooxda Riyadiisa ah ee Real Madrid. Gool maka dhalin doonaa oo maka xanaajin doonaa taageerayaasha Real Madrid?
3. Alexis Sanchez oo Inter Milan u safan wuxuu ka hortagayaa kooxdiisi hore ee Barcelona. Goal maka dhalindoonaa oo maku dabbaaldegi doonaa?
4. Paco Alcacer wuxuu ka hortagayaa Kooxdiisi hore ee Barcelona oo uu Ciil iyo Cuqdad u qabo. Ma aargoosandoonaa oo awooddiisa ma tusi doonaa?
5. Ronaldo waxay markale foodda isdaridoonaan Atletico Madrid oo ay xifaaltan adag kala dhexeeyo taas ay ugu danbaysay sanadkii hore markuu hatrick kaga reebay UCL. Ronaldo vs Atletico, dagaal aan dhammaad lahayn.
6. Alvaro Morata wuxuu ka hortagayaa Kooxdiisi hore ee Juventus oo ahayd halkuu sida aadka ah ugu soo caan baxay.
7. Napolo sanadkii labaad oo xiriir ah ayey Liverpool foodda isdari doonaan, waana kulan minan iyo marti ah oo xiisahiisa wata.
8. Philippe Coutinho markiisii labaad ayuu laba sano gudohood ka hortagayaa Tottenham maadaama sanadkii hore uu kula soo ciyaarayaa Barcelona.
9. Ugu danbayntiina isla Coutinho wuxuu ka hortagayaa Tababarihii ugu horreeyey ee aamina awooddiisa iyo xirfaddiisa ciyaareed Mauricio Pochetino asagoo tababare ugu ahaa Kooxda Spanyol ee dalka Spain.
Aragtidaada qodobkee ugu xiisa badan?
Waxaa Diyaariyay: Amiir Boss
Previous articleNin Maraykan ah oo cashar lama ilaawaan ah u dhigay Waaxda Canshuuraha Maraykanka! + Sawirro
Next articleGOOGOOSKA: SSC Napoli vs Liverpool 2-0, Chelsea vs Valencia 0-1